Mpandraharaha ara-bola madinika - Miantso ny Fanjakana hamaha ny olana ny IMF
Publié septembre 14, 2020 par Book News
Mitohy hatrany ny antso ataon’ny IMF ho fanohanan’ny Fanjakana ny sehatra misy azy ireo.
Misedra olana ny IMF
Toy ny sehatra hafa ihany dia misedra fahasahiranana vokatry ny krizy ara-pahasalamana ny rafitra mpandraharaha ara-bola madinika na IMF mivondrona ao anatin’ny APIMF (Association Professionnelle des Institutions de Microfinance Madagascar). Ny fepetra izay noraisina teto amin’ny firenena nohon’ny hamehana dia niteraka fikorontanana teo amin’ny sehatry ny fihariana isan-tsokajiny ary nisy akony lehibe teo amin’ny toe-bolan’ny IMF.
Nidina ny tahan’ny famerenambola, ireo faritra voakasiky ny fihibohana no tena voa mafy, amin’ny ankapobeny dia eo amin’ny 29% eo ny fampindramana manana olana.
Namory mpanao gazety ny APIMF ny herinandro lasa teo. cc: Toria Dimbiniaina
Niakatra tsy toy ny mahazatra ny fisintonan’ireo mpametra-bola ireo tahiriny. Ireo rehetra ireo dia nisy fihantraikany goavana teo amin’ny toe-bolan’ny IMF. Manoloana izany dia manjavozavo ny hoavin’ny sehatra. Koa manaitra ny mpitondra fanjakana sy ny mpiara-miombon’antoka ny IMF.
« Heverina fa tsy afaka handeha amin’ny tena fiarenana sy fampandrosoana marina isika raha toa ka manao ankilabao seham-pihariana sasany », hoy ny sekretera jeneralin’ny APIMF, Fanjaharivola Rakotomaharo.
Izany no antoka amin’ny tena firosoana marina amin’ny Fandraharahana ara-bola tsy manavaka izay efa nametrahan’ny fanjakana paikady sy tanjona mazava.
Mahatratra 2 000 000 ireo mpiary ara-toekarena anatin’ny « sehatra tsy ara-dalàna » PAraka ny tatitry ny PNUD, ny « sehatra tsy ara-dalàna » izay mampiasa olona sivy amin’ny folo sy mahasahana ny 24% fiharia-karena anatiny no tena ho voadona mafy ao anatin’izao fihibohana izao satria ireo mpisehatra ireo dia marefo.
Hatreto dia ny IMF ihany no miezaka misahana azy ireo amin’ny tolotra ara-bola ary koa mitan-tsoroka azy ireo amin’ny hirosoany mankany amin’ny ara-dalàna. Ao anatin’izao vanim-potoana sarotra izao, ny IMF dia mampatsiahy fa mbola mibahan-toerana eto amintsika ny « sehatra tsy ara-dalàna » izay ahitana amin’ny 2 000 000 mpiary ara-toekarena, raha toa ka 177 000 ihany ny isan’ireo orinasa mijoro ara-dalàna.
Araka izany dia tsy tokony hanamaivana ny lanjan’ireo sokajy tsy mbola ara-dalàna ireo isika raha tena hampandroso marina ny toe-karena. Hatreto dia tsy misy afa tsy ny IMF no hany sahy misahana ireo sokajimpihariana ireo, izay amin’ny ankapobeny marefo ara-toe-bola sy mazàna tsy ampy fahaiza-manao.